Umphathi wendawo: Ukulawula ngokufanelekileyo idatha yedatha, ukusuka kwi-AutoCAD - Geofumed
NgoNovemba, 2014 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS
Ndiye ndiye ixesha hlola leli sicelo umdla, endiya ndiqinisekile nomdla abasebenzisi ezininzi zobugcisa Cad, aspiring ukusebenza kunye data GIS, njengoko shp ifayile kunjalo, KML, eyisebenzisayo, qhagamshela zedata okanye iinkonzo WFS .
Ku malunga Umphathi wezithuba, uphuhliso olwenzeka kwiinguqulelo ezimbini: Enye yedesktop, enezinto zayo zokusebenza ze-CAD-GIS, enye enye iplagin ye-AutoCAD, efumaneka kwiinguqu ezivela kwi-AutoCAD 2008 ukuya kwi-AutoCAD 2015.
Siyazi ukuba namhlanje kukho izixhobo emininzi emarikeni, zombini imvelaophi vula nasekusweleni, ngoko wenze izisombululo entsha kufuna umsebenzi ngononophelo zikhewu eshiywe ngabathengisi ezinkulu software kunye nabasebenzisi yesiqhelo eqhelekileyo. Emva kokukhuphela isixhobo kunye nokuzama imithombo yemithombo eyahlukeneyo, ndiyakholelwa ukuba ubuchule bayo buphendula imibuzo evela kubaqeqeshi kwindawo ye-geoengineering efana nale:
Ngaba kunokwenzeka ukuxhuma i-AutoCAD ne-PostGIS?
Ndingayitshintsha njani ifayile ye-KML kwi-CAD?
Ngaba unakho ukubiza inkonzo yeWFS kwi-AutoCAD?
Indlela yokuguqula idatha esuka kwi-Open Street Map kwifayile ye-ESRI Shape?
1 Umphathi wezithuba kwideskithophu.
I sixhobo sedesktophu yenza iinkqubo zokubonakalisa, ukuhlaziya, ukuhlela, ukuprinta nokuthumela idatha yedatha. Oku akudingi i-AutoCAD, kuba ihamba ngokuzimela kwiWindows.
Ifomathi zendawo ezixhasa
Nangona i-Spatial Manager kwidesktop ibonakala ilula, i-GIS / i-CAD yokulawula idatha yedatha iya ngaphaya kwezinto ebezikulindele kwangaphambili:
Funda idatha ukusuka kwimithombo yendawo ye-20, njengoko kuboniswe kwithebhile ukuya ngasekunene.
Unokuhlela idatha ye-vector kunye ne-tabular ukusuka kwi-SHP, i-KML / i-KMZ kwifayile kwi-Google Earth.
Uyakwazi ukufunda nokuhlela iifayile zetekisi njengombhalo we-ASCII, unjalo kwaye ulungelelanisa uluhlu kwifom ye-CSV.
UVía OGR unokuhlela idatha ye-DGN kwi-Microstation V7, kunye ne-DXF, iTAB / MIF kwi-Mapinfo. Njengokufundwa kwe-E00 ye-ArcInfo, GeoJSON kunye ne-WFS.
Ngokwendawo yolwazi lweendawo, ungakwazi ukuhlela ngqo i-PostGIS, iSQLite kunye ne-SQL Server.
Ungafunda nge-ODBC (ungahlaziyo) nezinye imithombo yedatha.
Nge-FDO ungahlela idatha kwi-AutoDesk SDF, funda i-Web Features Services (WFS) kunye ne-MySQL.
Iyakwazi ukufunda nokuchithwa kwedatha ye-GPS (GPX)
Ukufowunela umthombo kufuneka ukhethe kuphela ifomathi, i wizard ikhokelela izigqibo ezifana negama kuyo umaleko, data ziya kuza umbuzo, umbala, elubala, kwaye ukuba iipolygons zigcinwa okanye uhlobo arc-node Idatha generated. Ngexesha elide uzakufumana iimpawu eziphathekayo, ezifana nemisebenzi ehleliweyo kunye nokudonsa / ukulahla kwi-Windows Explorer.
Kwakhona kunokwenzeka ukuba ubonise ukubonakaliswa kunye nenkqubo yesetyenzisiweyo sokuqala kocingo, kwaye ucele ukuba utshintshwe kwenye; luncedo xa sineenkcukacha ezivela kwimithombo eyahlukeneyo kwaye sinethemba lokujonga ngendlela efanayo. Ixhasa iinkqubo ezininzi zonxibelelwano, ezinokuthi zihlanjululwe kwaye zihlulwe ngamagama, indawo (indawo / ilizwe), ngekhowudi, ngohlobo (iprojekthi / i-geographical).
Imisebenzi ye-CAD - i-GIS
Kuyinto sisixhobo esinamandla ngenene, kuba kanye zingatshintshwa idatha eboniswe ngokulula kakhulu ukubonisa iimpawu, umaleko eyahlula iimpawu, Ukuze inguqu kunye ilungileyo: ukubiza umfanekiso ongasemva okanye Bing Maps, MapQuest, okanye abanye.
Ezinye zezenzo azibonakalwanga, ngaphandle kokuba zifunwa, kuba ziyimeko. Njengomzekelo, bonani ukuba ukhetho irekhodi lusetyenzisa ukhetho lokukhetha, njengokususa, ukutshintshela kwidatha, ukuchithwa ukhetho okanye ukudala umgca ngemiphumo ekhethiweyo.
Kukho ezinye izinto zokusebenza, ezikulo nqaku andichazi ngokucacileyo iinkcukacha, ezifana nokushicilelwa kweemephu zokuthunyelwa okanye iimpawu ezikhethiweyo, enembileyo.
Thumela kwezinye iifom
data Vector kanye ezichongiweyo kwi imithombo panel kwedatha uzakurhwetywa ngaphandle kwi iifomati 16 ilandelayo: SHP, KML, KMZ, ASC, CSV, Nez, TXT, xyz, UPT, DB, SQLite, SDF, DGN, DXF , ITAB kunye neMIF.
Qaphela ukuba oku kuthunyelwa kuzakuzisa iinkqubo zokusetyenziswa ngokuqhelekileyo, kodwa ngoku akukho nasiphi na isicelo esenzayo, njengedatha evulekileyo Vula i-Street Street (OSM) kwaye uyithumele kwi-DXF okanye kwi-SHP.
Imizila egcinwe njengemisebenzi
Umphathi wezithuba akusiyo isixhobo esipheleleyo se-GIS, njengezinye izisombululo, kodwa uncedisa ukuphathwa kwedatha. Nangona kunjalo, kunempawu yokuba nayiphi na umsebenzisi we-GIS angalindela ukuyisebenzisa ngokufanelekileyo. Umzekelo ngumsebenzi owaziwa ngokuba yiMisebenzi, apho ungagcina khona isimiso sokuyibiza kwakhona ngenye ixesha, umzekelo:
Ndifuna ukugcina umaleko data ebizwa parks.shp njengoko format KML, nokuba umaleko ekuqaleni e zeCRS nad 27 / California Area Mna, kwaye ndinethemba ukuba iba WGS84 usebenzisa Google Earth. Ukongezelela koko, ukusebenzisa idata njengegama kunye NAME impahla inkcazelo, oluhlaza fill umbala udini etyheli, 1 pixel ebanzi 70% elubala. Ngokuphakama kwezilwanyana ezizingelwayo phezulu nakwindawo ethile yeDropbox.
Xa ndigijima okokuqala, libuza ukuba ndifuna ukuyigcina njengomSebenzi, ukuyiqhuba naliphi na ixesha, kwimiyalezo ye-Operating System.
Ukuba ndiyigcina njengomsebenzi, xa ndibonisana nayo, kuya kuba nedatha echazayo elandelayo:
Chofoza 'Phatha' ukwenza ezi zikhetho ezilandelayo:
- Ifayile: Amancinci: \_ Isampuli yedatha \_ SHP \_ Parks.shp
- Ifayile: C: \_ Abasebenzisi \_ galvarez.PATH-II \_ Downloads \_ Parkskml
- Itafile ekujoliswe kuyo iya kubhalwe ngaphezulu xa kuyimfuneko
- Iya kuguqula izilungelelaniso zomthombo kunye neeramitha ezilandelayo:
- Umthombo we-CRS: indawo ye-NAD27 / yaseCalifornia I
I-Target ye-CRS: I-WGS 84
- Usebenziso: NAD27 ukuya kwi-WGS 84 (6)
Ukugcina iindlela kunye neProjekthi
Ungachaza iindlela ezifutshane, ezibizwa ngokuba zifutshane, ezifana neArcCatalog, ngokuchonga umthombo wedatha oza kuthethwa rhoqo. Ifayile nayo ingagcinwa kunye nokwandiswa kweSPSP, ukugcina zonke iinkqubo njengeprojekthi yeQGIS okanye i-ArcMap MXD.
Iilayisenisi kunye namaxabiso eDesktop yedesktop
Ku nokuba njalo khuphela iinguqulelo zesilingo weMphathi weZithuba. Kukho izixhobo ezintathu zezi sixhobo: eziSiseko, eziPhezulu kunye neeNzululwazi, ezinokusebenza ngokukhawuleza, njengoko kuboniswe kwitafile elandelayo:
Iipropati eziPhezulu eziSiseko zoPhuhliso oluPhambili
Ulawulo lwamatye kunye nemephu
Hudula kwaye ubeke idatha yendawo kwimephu
Imephu yemvelaphi (izitalato, imifanekiso, i-hybrid)
Ukuvula imephu ngokuhlakanipha
Khetha kunye nokucoca kusekelwe kwiimpawu
Thumela ulwazi malunga nokusetyenziswa kweofisi okanye izicelo ze-CAD
Ukuprintwa kweemephu ezikhethiweyo okanye iimpawu
Ukubonisana kwedatha yendawo
Yenza izitsha ezintsha kwikhetho okanye imibuzo
Iiprojekthi zemibala kwiimephu
Ukwahlula kweendlela kwiindawo ezintsha
Izangaphandle zangaphakathi nangaphakathi
Nqamula iziqulatho ezivela kwimithombo yedatha yangaphandle
Khuphela iimpawu kwiziqendu
Ukuphatha amancinci (amancinci)
Ukufikelela kwiifayile zendawo (SHP, GPX, KML, OSM, njl.).
Ukulawulwa kwemithombo yolwazi
Ukufikelela kwiinkonzo zeenkcukacha zendawo (iSQL Server, PostGIS, njl.)
Ukufikelela kwenye idibaniso (WFS, ODBC, njl.).
Khangela uphinde uthumele idatha
Hlela idatha yeefayili
Ukuhlela idatha ezininzi
Susa iimpawu ezingafunekiyo
Gcina izalathisi eziguqulwe kwimiqolo emitsha
Imisebenzi kunye neenkqubo
Ukungenisa nokuthumela iinkqubo
Ukuzenzekelayo kweenkqubo ngokusebenzisa imisebenzi (imisebenzi)
Yenza imisebenzi kwi window yenkqubo yokusebenza
Ixabiso leMvume nganye
2 Umphathi wezithuba ze-AutoCAD.
Le iplagin ilungele ukongeza izixhobo zendawo kwiinguqu eziphambili ze-AutoCAD, nangona iphinde isebenze kwi-Civil3D, i-Map3D kunye ne-Architecture.
Kule meko, ndizame ukusebenzisa i-AutoCAD 2015, kwaye emva kokufakela ityhubhu ibonakala kwiRibhoni eneempawu ezithile. Ngokuqinisekileyo, akuyiyo yonke iinguqulelo zeDesktop, kuba i-AutoCAD inemiyalelo yayo.
Ukuba udala umthombo wedatha, nqakraza ngqo kwi "Imithombo yolwazi lomsebenzisi"Kwaye ukhethe"Umthombo wedatha omtsha"U Emva koko ukhethe uhlobo lomthombo, ezo zikhetho ezifanayo kwikhompyutheni yedeskithophu.
Siyazi ukuba ezinye oku kunokwenzeka ukususela AutoCAD Imephu kunye 3D Civil nge OGR, ke xa sihlola yonke into eyenza Manager Spatial siyaqonda ukuba bemeko- esi sicelo baye bacinga ngokuzinikela kuzo zonke iinkalo ukuba abasebenzisi AutoCAD Abakwazi ukwenza ngendlela efanelekileyo. Imiba efana ubiza ngomaleko PostGIS, ukunika umzekelo, okanye inkonzo WFS epapashwe kwi GeoServer umaleko ebonisa indawo yokugcina data Oracle Spatial.
Ukuze sibone ukusebenza kweMphathi weZithuba kwi-AutoCAD, senze le vidiyo ngemimiselo yentshisekelo yethu.
Kule vidiyo okokuqala ibizwa ngokuba ngumgca wendawo shp, kunye nomda welizwe, omnye umasipala unomda. Kamva, unxibelelwano kwiinkonzo zeWFS zenziwe kwaye ekugqibeleni uluhlu lweepakethe zefayile ze-Microstation ze-DGN kwifomu ye-arc-node.
Ingabonakaliswa ukuba amanqaku aya kuza njengeebhloko ze-AutoCAD, ezibandakanya ukuba iibhloko ezihlukeneyo zisetyenziswe ngokusekelwe kwisimo se data. Qinisekisa nokuba ziya kuza njenge-polylines, i-2D polylines okanye i-polynica 3D.
Emva koko, ukuba ubonisa ukuba uyangenisa iimpawu njenge-XML yedatha efakwe kwi-Data, iya kuza njengezixhobo zeNkcukacha zeNkcukacha eziLongezelelweyo (EED). Le nxalenye ifana kakhulu noko i-Bentley Map yenzayo, ukungenisa idatha kunye ne-DGN njengedatha ecacisiweyo ye-XFM.
Umphathi weZithuba zoLwazi lwe-AutoCAD
Kukho iinguqulelo ezimbini zeeLayisense, kulo mzekelo omnye ubizwa ngokuba yiSiseko yoNyaka kunye ne-Standard Standard Edition, efana neyodwa, ngokoluhlu lulandelayo lwezinto zokusebenza:
Ukungenisa idatha yendawo yendawo kwimidwebo ye-AutoCAD
Ukuguqulwa kwamalungiselelo okungenisa
Iphaneli yomboniso wedatha efakwe (EED / XDATA). Oku kusebenza kuphela kwi-Standard version.
Izinto zifakwe ngaphakathi kumzobo omtsha okanye okhoyo
Izinto ziza kuluhlu lokuya kwindawo esekelwe kwixabiso lwedatha
Ukusetyenziswa kweebhloko okanye i-centroids
Vimba ukufakwa kwisiseko seenkcukacha
Ukuzalisa nokucaca kwee-polygons
I-polygon centroids xa kuyimfuneko
Ukuphakama kunye nobukhulu ukusuka kwiinkcukacha zedatha
Ngenisa idatha kwiileta ezifana ne-EED. Oku kusebenza kuphela kwi-Standard version.
Ukufikeleleka kwidatha yendawo (SHP, GPX, KML, OSM, njl.)
Ukusingathwa kwemithombo yolwazi. Oku kusebenza kuphela kwi-Standard version.
Ukufikeleleka kwiinkcukacha zolwazi. Oku kusebenza kuphela kwi-Standard version.
Ukufikelela kwamanye amaxhumo (iWFS, i-ODBC, njl.). Oku kusebenza kuphela kwi-Standard version.
Ixabiso lomphathi wezithuba ze-AutoCAD
I-Basic Edition inexabiso le-US $ 99 kunye ne-Standard Edition US $ 179
Zombini izixhobo ziyisombululo esinomdla Umphathi wendawo yeDeskithophu ibaluleke gqitha, ekubeni imisebenzi yokuguqulwa, ukuhlela, ukuthumela izinto kunye nokuhlaziywa kwedatha kuvela kwigama layo. Nangona njengoko ndikhankanyileyo, kuyisisombululo esongezelelweyo nesisemkhatsini phakathi kwemiqathango eyenziwa nge-CAD kunye nokuxhaphazwa kolwazi olwenziwa kwi-software ye-GIS.
Eyesibini ibonakala kum ukuba iya kukhula ngakumbi njengoko ifumana ingxelo engaphezulu kubasebenzisi; ngoku ngoku kuzalisa oko i-AutoCAD ayikwazi ukwenza.
Ukuqwalasela amaxabiso, utyalo-mali alubi, ukuba siyakuqwalasela ingqalelo inzuzo.
Ukuze ukwazi uluhlu lwamaxabiso, ungakhangela eli phepha. http://www.spatialmanager.com/prices/
Ukuze ufunde okungakumbi malunga neempawu kunye neendaba, ngulo Umphathi weBlog okanye ngaphakathi i-Wiki
Post edlulileyo«Edlulileyo Khangela uphinde usetyenzise ukusebenzisa amazwi avamile: i-Microstation
Post Next Akunjalo. Ukuhlukana phakathi kweemephu ezindala kunye neemephu zamanduloOkulandelayo "